Madagasikara : “Tafavoaka tamin’ny haizina mikitroka” -
AccueilRaharaham-pirenenaMadagasikara : “Tafavoaka tamin’ny haizina mikitroka”
18/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Azo oharina amin’ny haizina mikitroka ny toekarena teto Madagasikara noho ny nafitsoky ny mpanongam-panjakana taorian’ny taona 2009. Na dia mpamatsy vola iray aza, dia tsy sahy nampiasa ny volany sy niditra teto amintsika tamin’izany. Nihanjahanja samirery teo ny firenentsika. Ny sandam-bola tsy voafehy rahateo, ny harin-karena faobe zara raha nisy 2%, sns.
Amin’izao fotoana izao anefa, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola (MFB), Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona, efa tafavoaka tanteraka tamin’io haizina mikitroka io i Madagasikara.
Izany no tanteraka, noho ny ezaky ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nisy ny ezaka goavana nandresena lahatra ireo mpamatsy sy mpampiasa vola mba hampiasa ny volany eto amintsika. Voaporofo izany ankehitriny, satria mazoto mampiasa ny volany eto Madagasikara ireo mpampiasa vola vahiny. Anisan’izany, raha ny fanazavana hatrany, ny fiaraha-miasa amin’ny firenena Sinoa sy ny orinasa Eiffage sy ny maro tsy ho voatanisa. Manamarina ny fahatokisan’ireo firenena vahiny ny fitondram-panjakana ankehitriny izany fiaraha-miasa marolafy izany. Eo ihany koa ny fahamarinan-toeran’ny “Ariary”. Izany koa dia maneho etoana ny fahatokisan’ny mpampiasa sy mpamatsy vola an’i Madagasikara.
Maro ireo sehatra niompanan’izany fiaraha-miasa tamin’ireo mpampiasa vola izany. Anisan’ny govana amin’izany ny sehatry ny angovo, ny lalana, ny fambolena sy fiompiana, ny fampianarana sy ny fahasalamam-bahoaka, sns.
Nambaran’ny minisitry ny MFB, Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona, fa mivoatra be amin’izao fotoana izao ny sehatry ny angovo, izay hananantsika maro ny eo amin’ny angovo avy amin’ny herinaratry ny riandrano (énergie hydro-électrique). Izany hoe, araka ny ambetin-tenin’ny Filohan’ny Repoblika, efa miditra tsikelikely amin’ny angovo azo havaozina isika.
Ankoatra izay, dia misy ihany koa ny fanalefahana ny fandoavan-ketra, izay efa lasa karazany roa izany amin’izao fotoana izao dia ny IBE sy ny TVA.
Etsy andaniny, izay tena mametraka ny fahatokisan’ireo mpampiasa vola ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana eo amin’ny ady amin’ny kolikoly sy ny famotsiam-bola.
Manana tanjaka any Asia ary tsy azo tsinontsinoavina mihitsy i Sina. Nandritra ny Fihaonamben’i Boao tany Sina mantsy no fantatra fa hampiasa vola mitentina 750 miliara Dolara ny firenena sy ny fanjakana Sinoa. Marihina fa ...Tohiny